Piwik Versus Google Analytics: Zvakanakira On-Premise Analytics | Martech Zone
Piwik Versus Google Analytics: Izvo zvakanakira zveOn-Premise Analytics
Svondo, May 15, 2016 Svondo, May 15, 2016 Douglas Karr
Takanga tine mutengi uyo watakakurudzira Piwik kwaari. Ivo vanga vachimhanyisa mune dzimwe dzakakomba nyaya dzekubika neese maGoogle Analytics uye yakabhadharwa bhizinesi analytics nekuda kwehuwandu hwevashanyi ivo vaiwana yavo saiti. Mahombe saiti haazive kuti pane ese ari maviri latency nyaya uye kuderedzwa kwedata neGoogle Analytics.
Mutengi anga aine tarenda rakakura kwazvo rewebhu saka kutora analytics zvemukati zvaive nyore. Pamwe pamwe nekuchinjika kwekuchinja zvichienderana nepuratifomu yavo, iro boka rekushambadzira raizopihwa zvakare rakaringana analytics, munguva chaiyo, pasina zvikanganiso zvinoverengeka zvinoenderana ne sampling yevashanyi.
Kana iwe uchinzwa kushomeka neGoogle Analytics, Piwik inogona kunge iri imwe nzira huru Piwik Nharaunda edition yakavhurika-sosi analytics chishandiso chinouya nemagadzirirwo enguva dzose uye zvitsva zvinoburitswa mahara. Piwik PRO Pane-Nzvimbo inosanganisira akasiyana emamwe ekuwedzera maficha uye masevhisi Piwik PRO inopawo a cloud mhinduro (kwaunenge uchiri neyako data) kana usiri kukwira kuitisa mukati. Piwik ine yakazara kuenzanisa kwemhinduro imwe neimwe pane yavo saiti.
Dhawunirodha Yakazara Kuenzanisa
Piwik akaburitsawo infographic nezvakanaka zvese zvavanopa pamusoro peGoogle Analytics. Ichokwadi, uku kwakarerekera infographic. Google Analytics inopa Google Analytics 360 yekambani mutengi. Uye hazvifanire kuenda pasina kutaura kuti Google ine mukana weWebmaster neAdwords kusangana iyo mumwe mupi asingazombopa.
Piwik PRO Zvimiro
Piwik inosanganisira ese akaenzana manhamba emishumo: epamusoro mazwi uye injini dzekutsvaga, mawebhusaiti, epamusoro peji ma URL, mazita emapeji, nyika dzevashandisi, vashandisi, sisitimu inoshanda, chikamu chemusika webrowser, resolution yechiso, desktop VS nhare, kuita (nguva pane saiti, mapeji pakushanya ) analytics mishumo yezvikamu - Vashanyi, Zviito, Vanotumira, Zvinangwa / e-Commerce (30+ mishumo). Maona Piwik yakazara rondedzero yezvinhu.
Real-nguva dhata yekugadzirisa - Tarisa chaiyo-nguva kuyerera kwekushanya kune webhusaiti yako. Tora yakajeka ruzivo rwevashanyi vako, mapeji avakashanyira uye zvinangwa zvavakakonzera.
Yakasarudzika Dashibhodhi - Gadzira madhibhodhi matsva ane widget yekumisikidza inoenderana nezvaunoda.
Ese Webhusaiti Dashibhodhi - nzira yakanakisa yekutarisa zviri kuitika pane ako mawebhusaiti kamwechete.
Mutsara Evolution - Yazvino uye yakapfuura metric dhata yechero mutsara mune chero chirevo.
Analytics ye e-commerce - Nzwisisa uye uvandudze bhizinesi rako repamhepo nekutenda kune epamberi e-commerce analytics features.
Chinangwa chekushandura yekutevera - Teedzera Zvinangwa uye uone kana uri kusangana nezvinangwa zvako zvebhizinesi zvazvino.
Chiitiko Chekutevera - Kuyera chero kudyidzana nevashandisi pane ako mawebhusaiti nemaapp.
Zvemukati Zvekutevera - Pima zvimiro uye mabhatani uye CTR yemifananidzo mireza, zvinyorwa zvemabhena uye chero chinhu pamapeji ako.
Saiti Kutsvaga Analytics - Tevedza kutsvaga kwakaitwa pane yako yemukati yekutsvaga injini.
Tsika Dzakakura - Govera chero dhata yetsika kune vashanyi vako kana zviito (semapeji, zviitiko,…) uye wozoona mishumo yekuti kangani kushanya, kushandurwa, kutariswa kwemapeji, nezvimwe.
Tsika Dzakasiyana - Zvakafanana neCustom Size
Geolocation - Tsvaga vashanyi vako kuti vanyatsoona Nyika, Dunhu, Guta, Sangano. Wona huwandu hwevashanyi paMepu yeNyika neNyika, Dunhu, Guta. Wona vashanyi vako vazvino munguva chaiyo.
Mapeji Shanduko - Tarisa zvakaitwa nevashanyi kare uye mushure mekuona iyo chaiyo peji
Kufukidza Peji - Ratidza manhamba zvakananga pamusoro pewebhusaiti yedu nekufukidza kwedu kwakanaka.
Saiti uye peji kumhanyisa mishumo - Inochengeta yekukurumidza kuti yako webhusaiti kuendesa zvemukati kune vako vashanyi.
Tevedza kusangana kwakasiyana kwevashandisi - otomatiki kuteedzera kwefaira kurodha pasi, kudzvanya pane ekunze mawebhusaiti zvinongedzo, uye sarudzo yekusarudzika yemapeji makumi mana nemana.
Analytics mushandirapamwe wekutevera - Rinozviongorora Google Analytics mushandirapamwe parameter muma URLs ako.
Tevera traffic kubva kunjini dzekutsvaga - Inopfuura mazana masere enjini dzekutsvaga dzakateedzerwa!
Yakarongwa email mishumo (PDF uye HTML mishumo) - Embed mishumo mune yako app kana webhusaiti (40+ Widgets inowanikwa) kana kupinza PNG Girafu mune chero tsika peji, email, kana app.
Zvirevo - Gadzira zvinyorwa zvemavara mumagirafu ako, kuti uyeuke nezve zvimwe zviitiko.
Hapana muganho wedata - Unogona kuchengeta data rako rese, pasina chero miganho yekuchengetedza, zvachose!
Kubatanidzwa - ine anopfuura makumi mana CMS, webhu masisitimu kana ecommerce zvitoro
Mobile App Ongororo nePiwik iOS SDK, iyo Android SDK, uye iyo Titanium Module.
Tags: imwe nzira kune google analyticsanalytics apianalytics dhataanalytics kukwanahosted analyticson-fungidziro analyticsPiwikpiwik gorepiwik nharaundapiwik propiwik maringe gapiwik maringe neGoogle analyticspiwik vs gapiwik vs google analyticschaiyo nguva analyticschena chitaridzi analytics
Iwo Anokurumidza Ecommerce Mapuratifomu eDesktop uye Nhare
Vaka Unogadzikana Hwevatengi Ukama neHurumende Zvemukati